लुलुङ्जोङ क्षेत्र फल्समा निर्माण भवन चिनियाँ क्षेत्रमा नै पर्छ : हुम्ला सीडीओ::Jalpa Khabar
लुलुङ्जोङ क्षेत्र फल्समा निर्माण भवन चिनियाँ क्षेत्रमा नै पर्छ : हुम्ला सीडीओ
Published on: १२ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:०७
हुम्ला : नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा लाल लुलुङ्जोङमा चीनले भवन निर्माण गरेको खबर पाए पछि हुम्लाका मुख्य जिल्ला अधिकारी चिरंजीवी गिरीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले निरीक्षणको लागि सीमाको अवलोकन गर्‍यो। सीडीओ गिरीले निरीक्षणको बारेमा राइजिंग नेपालका हुम्ला संवाददाता राजन रावतसँग कुरा गरे।
अंशहरू: तपाईको निरीक्षणको पत्ता लगाउनु के हो?
प्रत्येक वर्ष एक पटक सीमा स्तम्भको निरीक्षण गर्नु हाम्रो नियमित कर्तव्यको अंश हो। हाम्रो कर्तव्यको एक भागको रूपमा, टोलीले यस वर्ष सीमा निरीक्षण गर्न लुलुङ्जोङमा कूच गरे। चीनले निर्माण गरेको भवन चिनियाँ क्षेत्रमा पर्छ भनेर निरीक्षण टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। दुबै राष्ट्रका अधिकारीहरूले लाप्चा क्षेत्रको नम्खा गौणपालिका भवन निर्माण स्थलमा नक्शा लम्बाएपछि पत्ता लाग्यो कि चीनले निर्माण गरेको भवन चिनियाँ सीमा भित्र सीमित थियो। निरीक्षण टोलीले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।
लुलुङ्जोङमा निरीक्षण कसरी भयो?
दुबै राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल र चीनको नक्सा मिलाउन आधा घण्टा लाग्यो। नक्शा टेलि गर्दा, पत्ता लाग्यो कि लुलुङ्जोङ क्षेत्र, जहाँ भवन निर्माण गरिएको छ, चिनियाँ इलाकामा अवस्थित छ। यद्यपि हाम्रो निरीक्षण टोलीले विज्ञहरू समावेश गरेको छैन, दुबै राष्ट्रहरूको नक्सा हेरेर, यो स्पष्ट भयो कि लुलुङ्जोङ क्षेत्र नेपाली क्षेत्रभित्र पर्दैन। यो नक्शा हो जसको आधारमा क्षेत्रहरू निर्धारित गरिन्छ। मलाई लाग्दैन कि तथ्य र प्रमाणहरू बिना टिप्पणी गर्नु उचित छ। दुबै राष्ट्रहरूको निरीक्षण टोलीहरूले नक्साको राम्ररी जाँच गरेका छन्। स्थानीयलाई अन्धाधुन्ध विश्वास गर्नुको सट्टा, म सबैलाई तथ्य र प्रमाणहरू जाँच गर्न अनुरोध गर्दछु। टोलीले निरीक्षण मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालयमा पेश गरिसकेकोले यससम्बन्धी थप जानकारी मन्त्रालयबाट लिन सकिन्छ।
नेपालको टोलीलाई कस्तो व्यवहार गरियो?
यो अफवाहहरू कि नेपालको निरीक्षण टोली पीछा गरियो र लुलुङ्जोङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति थिएन, गलत छ। हाम्रो टोली टिपरबाट लुलुङ्जोङ जोउ पुगेको थियो। कोविड-१९ डराउने कारणले, बैठक सामाजिक दूरी राखेर गरीएको थियो। यो सत्य हो कि चिनियाँ पक्षले माइक प्रयोग गरेर हामीलाई सूचित गरेको थियो तर यो एकदम सामान्य हो। भाषा अवरोधका कारण सञ्चार गर्दा हामीले केहि कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। चिनियाँ अधिकारीहरूले हाम्रो लागि खाना र पानीको प्रबन्ध गरेर नेपालप्रति सद्भाव देखाए। चिनियाँ टीम टकलाकोटबाट लुलुङ्जोङ क्षेत्र आउँदै गर्दा हामीले केही समयको लागि टिमको लागि कुर्नु पर्‍यो। यो अन्यथा लिनु हुँदैन।
स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीयहरूले किन त्यो क्षेत्र नेपालको हो भन्छन्?
मलाई विश्वास छ सबैले तथ्य र प्रमाणको आधारमा बोल्नु पर्छ। मैले पहिले नै भनेको छु कि दुबै देशहरूको नक्शाले प्रमाणित गर्दछ कि लुलुङ्जोङ चीनको हो।
स्थानीयवासी र स्थानीय प्रतिनिधिहरू भन्ने भनाइ छ कि त्यो क्षेत्र धेरै समयदेखि नेपालीले खार्का जग्गाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ तर यो प्रमाणित गर्न हामीसँग कुनै प्रमाण छैन।
प्रतिवेदन पेश भइसकेको हुनाले मलाई यो लाग्दैन कि यस विषयमा बढि कुरा गर्नु आवश्यक छ।
निरीक्षणको क्रममा सीमा स्तम्भ न। ११ भेटियो?
नम्बर ११ को सीमा स्तम्भ पत्ता लगाउनु निरीक्षणको प्रमुख उपलब्धी थियो। भनिन्छ कि स्तम्भ लामो समयदेखि हराइरहेको थियो। हाम्रो टोली यसलाई फेला पार्न सफल भयो।
स्तम्भ पत्ता लगाउन, हाम्रो टीम दुई दिनसम्म हिल्सामा रहनुपर्‍यो। उक्त स्तम्भलाई जीपीएसबाट नेभिगेसन गरिसकेपछि नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली बिहान ४:०० बजे हिल्साबाट यात्रा गरी उक्त खम्बालाई टाकुलेमा बिहान ११:०० बजे भेट्टायो।
हाम्रो टीमले १०, ११, १२,९ (१, २),८ (१, २), र ७ (१, २) हुम्ला सेक्सनको १५ सीमाना स्तम्भहरू मध्येबाट नौवटा स्तम्भहरू भ्रमण गरे। यी सबै खम्बाहरूको देशान्तर र अक्षांश पत्ता लागेपछि निरीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।